काठमाडौं जिल्लामा मात्र शुक्रबार ६२० जनामा संक्रमण पुष्टि , फुटपाथ पसलले भीड बढायो,संक्रमणको डर बढायो! - Subhay Postकाठमाडौं जिल्लामा मात्र शुक्रबार ६२० जनामा संक्रमण पुष्टि , फुटपाथ पसलले भीड बढायो,संक्रमणको डर बढायो! - Subhay Post
काठमाडौं जिल्लामा मात्र शुक्रबार ६२० जनामा संक्रमण पुष्टि , फुटपाथ पसलले भीड बढायो,संक्रमणको डर बढायो!
सुभाय् संवाददाताSeptember 11, 2020 मा प्रकाशित (६ दिन अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
काठमाडौं / निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा आज मात्र थप ६९६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उपत्यकामा थप ६९६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। बिहीबार मात्रै ५७२ जनामा संक्रमण देखिएको थियो।
आज पुष्टि भएकामध्ये काठमाडौंमा ६२०, भक्तपुरमा ३८ र ललितपुरमा ३८ जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ । यसरी संक्रमणले उच्च गति लिएको बेला उपत्यकाका तीनै सिडियोहरु भने लक्डाउन खुकुलो बनाउनेदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने र फुटपाथ तथा ठेलागाडामा समेत पसल राख्न दिने पक्षमा देखिएका छन् र त्यसै अनुसार आदेस जारी गरिसकेका छन् ।
फुटपाथ पसल खुलेपछि काठमाडौंको भित्री शहरको बजार बिहानैदेखि भीड देखिएको थियो । न सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने लागु भयो न त कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड नैं देेेखियो। यसले त कोरोना फैलाउन थप मद्धत हुने निश्चित देखिन्छ । यसप्रकारको फुटपाथ पसलले भीडभाड बढाउने र कोरोना फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारले भने यस्तो नगर्न विभिन्न वडा कार्यालयहरुले सूचना जारी गरेको छ । यसैबीच स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र चलाउने कि प्ररशासनले चलाउने बहस सुरु भएको छ ।